Uunana socod English Premier League ayaa By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Uunana socod English Premier League ayaa By tareenka
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 25/12/2020)
Waayo, musaafiriin dhici inay xiiso u ciyaaraha, socdaalka England waayo, kulan Premier League uu noqon karaa mid gaar ah a waayo-aragnimo. Iyadoo dhowr kooxood oo ku kici iyo ka dhicin horyaalka xilli kasta, waxay la micno ah marna ay isku jeer oo isku xiga, waxaa had iyo jeer run in ay ka soo kala bixiyeen oo dhan England iyo Wales. Tani waxay run ahaantii ka dhigaysa nooc ka mid ah faahfaahin dabiiciga ah Premier League ee this oo laga yaabo inay sahamiyaan dalka. Waxay ku lug leedahay magaalooyinka ugu caansan, qaar ka mid ah qaab ugu dareen xoog of degaanka dhaqanka, qaarna runti garoomo cajiib ah. Plus, raacid ka mid ah magaalada ku xiga wuxuu ku siin karaa bidhaaminaya quruxsan of baadiyaha caanka British!
Run noocan oo kale ah safar loo qaabeeyay kartaa in dhammaan noocyada kala duwan siyaabo kala duwan, siiyo in Premier League uu ka kooban yahay 20 kooxaha xilli. Tani waa wax ka mid ah tusaale ah in kastoo, oo ka mid ah wadooyinka kala duwan oo aad qaadi karto iyo magaalooyinka, garoomada, iyo kooxaha aad ka arki kartaa.
London si Brighton
Waxaa fiican in la bilaabo sort this ee safarka ee London, laba sababood. First, waxaa halkaas tahay u badan tahay in aad duuli gelin kasta. Markaasaa kii labaad, waxa ay hoy u tahay dhowr kooxood oo Premier League, waxay la micno ah ay meel fiican si ay u bilaabaan iyo dhamaadka safarkaaga for loop a nice agagaarka Britain. Waxaad bilaabi kartaa iyadoo kooxo dhowr ah, laakiin waxaan ku talin lahaa arkaya Chelsea ee Stamford Bridge. goobta waa heer sare, iyadoo mid ka mid ah darajayn garoomada Premier League xiganaya 140 sano taariikhda iyo dabeecadda sida xubno ka in ay sii dhex ugu fiican. Iyo kooxda had iyo jeer waa tartan (iyo waa in 2018 sidoo).
From London, mid ka mid ah wadada macquul ah in lagu bilaabo waa koonfurta xagga Brighton. Waa masaafo aad u deg deg ah in dhamaado mid ka mid ah England ee magaalooyinka xeebta ugu fiican ee Brighton. London Victoria station, London Bridge Station, iyo London St. Idaacadda Pancras oo dhan waxay leeyihiin raacid si toos ah in ay qaataan si qallafsan saacad.
Brighton si Cardiff
Marka Brighton, aad kala bixin karo, lugaha by socda qaar ka mid ah meelaha runtii gaar ah. deked yar ee magaalada caan (iyo in ay jawi cadaalad-sida mahad aadka madadaalo), oo waxaa jira dukaamo jir ah dhawr iyo degmooyinka makhaayad ku kacaya sahaminta. Football-caqliga leh, aad doonaa in la socday Falmer Stadium, taas oo ah mid ka mid ah kuwa cusub ee horyaalka. Brighton & Hove Albion ma yahay quwad ah ee horyaalka kubada cagta English, laakiin taageerayaasha ay noqon kartaa dareen iyo ciyaar waa hab fiican si ay u qaataan galabtii ama fiidkii diiran xeebta Magaalada dayrta.
Lille ilaa London Eurostar Train
Antwerp to London Eurostar Tareenka
Ka dib markii Brighton, waxaad u baahan doontaa inuu ku soo bilowdo cilada ilaa xagga galbeed, fursadaha iyo waxaa goobta yar. Waxaad kari safarka Bournemouth ama Southampton ee Southwest ah, tusaale ahaan, sida labada Magaalo kooxaha Premier League. Laakiin maxaa yeelay kubada cagta waa ka wanaagsan ilaa waqooyiga (oo sidaas waa magaalooyinka, ayaa muran la'aan), waxaa ugu wanaagsan in la bilaabo durki doonaa xagga woqooyi iyo sidoo kale. Sidaasi darteed waxaan ku talin lahaa jeeda Cardiff, Wales. Tareenadu saldhigga Brighton si Cardiff Central ordi karaa oo ku saabsan afar ilaa afar-iyo-bar ah saacadood, iyadoo meel kasta oo ka mid ah saddex isbedel. tareenada The on wadada this ay maamulaan badan ama ka yar maalintii oo dhan.
Cardiff in Liverpool
In Cardiff, aad doonaa in la arkaya Cardiff City ee Cardiff City Stadium, taas oo ah goobta si caddaalad ah saaxiib heerka this. Oo haddii ay dhacdo in aad waqtiga safarkaaga si aad u aragto ciyaar tartan ka dhaliyay Swansea City, aad ku noqon doonaa, waayo, dawayn dhab ah. Tani waa in ugu dambeyntii noqon stop si caddaalad ah oo degdeg ah si kastaba ha ahaatee en wadada si magaalooyinka kubada cagta weyn ka fog waqooyiga. saddex The- afar-saac oo tareen ka Cardiff Central in Liverpool Lime Street waa talo. Waa si caddaalad ah oo joogto ah oo sahlan wadada, caadi ahaan hal ama laba kaliya isbedel, oo waxaad qaadataa xaq u wadnaha ee kubada cagta English galay. In aan ku xuso tareenka aad qaadataa xaq u weheliyaan Cotswolds ah, meel qurux badan oo dabiici ah in a soo jiidashada dalxiiska oo dhami.
Liverpool in ay Newcastle
In Liverpool, laga yaabaa in aad rabto in aad iska dhigeen markii qaar ka mid ah si ay u sahamiyaan, sida ay tahay runtii magaalo dhab ah oo cajiib ah. Laakiin kubada cagta ayaa weli soo jiidashada ugu weyn ee. Anfield, halkaas oo Liverpool u ciyaara, waxaa lagu yaqaan in ay ka mid ah garoomada ugu fiican Premier League noqon, iyo dad badan oo rumaysan tani waxay noqon kartaa sanadka kooxda uu dib ugu hanto ammaanta Premier League oo ay qabsadaan horyaalka. Taasi oo kaliya si ay sheegayaan in garoonka, hore u ogaan lahaa ee ay tamar, waa in la daba qoraysa ee sannadka soo socda ama si, iyo sidoo kale laga yaabaa inay waayo-aragnimo ugu fiican kubada cagta oo dhan UK.
From this dhibic, waxaa jira xoogaa fursado ah. Haddii wakhtiga aad ku xadidan yahay, waxaa laga yaabaa in ugu wanaagsan in la qaato safarka aad u gaaban si ay Manchester ka hor inta sii jeeda London dib. Haddii uu jiro waqti, si kastaba ha ahaatee, Waxaan ku talinaynaa lahaa socday ee la soo dhaafay Manchester iyo tan iyo woqooyi, on waa maxay ahaan qallafsan geeyo saddex saacadood ah ka Liverpool Lime Street in Newcastle. Waxaad ka heli kartaa si toos ah kortaan, iyo halka this eg stretch ugu dheer ee dulmar oo dhan on map-ka, waa run ahaantii ma safar xun.
Newcastle in Manchester
St. James 'Park ee Newcastle waxaa laga yaabaa in garoonka nicest horyaalka, xitaa haddii ay arrin aan islahayn kartaa taariikhda meel sida Anfield. Waxaa qurux badan a, hal yimid, iyo mid ka mid ah halkaas oo waxaa jiri kara xoogaa of hamiday arrin. Dhab ahaantii, ka hor furitaanka dhawaan horyaalka, waxaa la soo jeediyay in Newcastle ka caraysiin kara Tottenham Hotspur sababta oo ah halhays cusub xilli on Tyneside ah iyo kacsi xaaraan ah oo la aaminsan yahay in ay ka iman kartaa badnaa this. murugooto in uusan ugu iman in ay noqon, laakiin tani weli waa meel ku dayasho mudan si aad u daawato cayaaraha ee sababaha isku daliishaday. Taasi waxaa loo weeciyay aad u istaahila ka dhigaysa.
Ka dib kulan deg deg ah ee Newcastle, waxaad qaadi kartaa tareenka back to Manchester, suurto gal on aad isla maalintaa haddii ay jadwalka u shaqeeyo baxay. Newcastle Central Station Manchester Victoria waa in a laba-iyo-bar ah safar laba saacadood iyada oo aan wax ka badan hal isbedel.
Waxaa jira fursado badan ee Manchester, sida laba ka mid ah kooxaha ugu caansan horyaalka ee – Manchester City iyo Manchester United – wac guriga magaalada. Haddii aad tahay qof si gaar ah galay kubada cagta iyo ma tahay inaad u isticmaalaya sida loo adeegsanayo in la faahfaahin wanaagsan, waa in aad isku dayaan in ay qabsadaan labada kooxood ee ka mid ah go, haddii jadwalka ogol yahay. Haddii kale, aad iyo sidoo kale ku dhajisan laga yaabaa qadaadiic ah. Man Utd ayaa. Old Trafford waa taariikhi ah stadium oo ka mid ah taageerayaasha cajiib ah; Man City ayaa Etihad Stadium waa gobolka-of-the-art more, iyo City ayaa kooxda fiican ee dabayaaqadii.
Marka aad samaysay ee Manchester waxa ay siman a, laba-iyo-bar ah ama tareen saddex saacadood dib u fuulaan si ay u London ka Manchester Victoria ama Manchester Piccadilly. Halkaa marka ay marayso in, safarka waa lagu duubo a! waxaa laga yaabaa in kastoo aad rabto in aad isticmaasho markii aad ku haray London si ay u arkaan mid ka mid ah kooxaha aydaan arkayn bilowga ah ee safarka. Sida ku xusan, waxaa jira dhawr fursadood oo wanaagsan.
aad diyaar u ah inay sahamiyaan safarka tareenka oo wuxuu ku raaxaysan qaar ka mid ah kubada cagta waa? website ugu fiican ee Order tababartay tigidhada waa Save A tareenka
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-the-english-premier-league-by-train%2F%0A- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#kubada cagta #soccer tareen safarka traveltips
Passionate about all things film, soccer and watching movies, helping others make their own way around this world. When I have spare time i love to also write and share my thoughts and stories. - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir